Linux 4.19-rc5: waxaa laga sii daayay gacanta Greg wixii dhacay kadib ... | Laga soo bilaabo Linux
Linux 4.19-rc5: waxaa laga sii daayay gacanta Greg wixii dhacay kadib ...
In Linux version 4.19-rc4 ee kernel horeyba waxaan maqalnay warka ku saabsan Linus Torvalds. Boostada lagu daabacay LKML wuxuu raaligalin ka bixiyay dhaqankiisa wuxuuna ku dhawaaqay inuu si ku meel gaar ah uga baxayo mashruuca Linux si uu caawimaad uga helo habdhaqankiisa iyo sidoo kale inuu naftiisa u huro mashruuc kale sida markii uu git sameeyay. Si kastaba ha noqotee, waxaan rajeynayaa inuu dhowaan soo laaban doono, laga yaabee inuu ku dhowaad 4.20 sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah dadka ay khuseyso ee ka socda Mareykanka, laakiin runtu waxay tahay inaanan hubin hubaal goorta uu dib ugu soo laaban doono ...
Hagaag, hadda wuxuu imanayaa marxaladda xigta ee horumarka, tan iyo markii mashruuca, in kasta oo xaqiiqda in abuuraheeda uu ka guuray, uusan joogsan. Sidaan sifiican u ognahay, Jarmalka Greg Kroah-Hartman Isagu waa gacanta midig ee Linus waana midka dhaxli lahaa mashruuca markii Linus hawlgab noqdo ama uu baxo. Taasina waa waxa uu hadda sameeyay, hawlgabkan ku-meel-gaarka ah ee Linus isagu wuxuu ku sii jiray taliska, sidaa darteed kernelku wuxuu ku jiraa gacmo wanaagsan. Wuxuu mas'uul ka ahaa daabacaadda boostada LKML isagoo ku dhawaaqaya daahfurka Linux 4.19-rc5, taas oo ah, Musharaxa Shanaad ee Shaacinta. Kani waa RC kii ugu horreeyay ka dib bixitaanka Linus, sidaan soo sheegnay. Greg wuxuu fursad u helay inuu dhaho isbuucaan waa xiiso badnaa xaga aragtida bulshada wixii dhacay. Isaguna wuxuu sidoo kale qaatay fursad uu ku dhaho marka laga eego dhanka farsamada rc5 waa bilaabis caadi ah, iyada oo aan la arkin dhibaatooyin muuqda ama wax la mid ah. Isbedelada ugu caansan waxaa loola jeedaa naqshadaha x86 iyo PPC, wadayaasha shabakadaha, darawalada dhawaaqa iyo ASLA, DRM / AMD GPU, iwm, sidii caadiga ahayd.
Isbeddelada kale ee la soo saaray ayaa sidoo kale tixraacaya Bluetooth, Xen, KVM, SCSI, ARM, ext4, iyo nidaamyo kale, inkasta oo inta badan isbeddelada ugu habboon ay yihiin kuwa ku xusan tuduca hore. Aniguna waxaan ku gabagabeynayaa in Greg uu sidoo kale dadka ku dhiirigaliyay inay ka soo dejistaan ​​nuqulkan cusub kernel.org oo ay tijaabiyaan si ay u arkaan haddii wax waliba ay si sax ah u shaqeeyaan ama haddii wax qaldamaan ay soo sheegaan dhibaatooyinka si markaa loo hagaajiyo ka hor inta aan la sii deyn nooca yar yar ee ugu dambeeya 4.19.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Linux 4.19-rc5: waxaa laga sii daayay gacanta Greg wixii dhacay kadib ...
Ugu dambeyntii dhowr sano kadib wuxuu yimaadaa nooca Alpha ee PlayOnLinux 5.0